ကျိုင်းတုံမြို့သို့ သွားရအောင်……. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျိုင်းတုံမြို့သို့ သွားရအောင်…….
- Wunna Aung
Posted by Wunna Aung on Jun 24, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
ကျွန်တော် ပြောပြချင်တာတော့ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံမြို့လေး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်…… မရောက်ဖူးသေးတဲ့သူတွေလဲ ရောက်ဖူးကြအောင်…. ရောက်ဖူးပြီးသား သူတွေလဲ အလွမ်းပြေပေါ့ဗျာ….. ကျွန်တော် ရောက်ဖူးနေဖူးခဲ့တဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ပါ……
ကျိုင်းတုံမြို့ကို သွားမယ်ဆိုရင် ကားနဲ့ဖြင့်ဖြင့် လေယာဉ်နဲ့ ဖြင့်ဖြင့် သွားလို့ရပါတယ်…. ကားနဲ့သွားမယ် ဆိုရင်တော့ တောင်ကြီးမြို့က တစ်ဆင့်သွားရမှာပါ…. လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေး ကတော့ မကောင်းသေးတာကြောင့် တောင်ကြီးမြို့ကနေ မနက်စောစောထွက်ပြီး ဟိုပုံး၊မိုင်းပွန်၊ လွိုင်လင်၊နမ့်စန်၊ခိုလမ်၊ ကွန်ဟိန်း စတဲ့ မြို့တွေကို ဖြတ်သန်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်…… များသောအားဖြင့် ခိုလမ်မြို့ နဲ့ ကွန်ဟိန်း ကိုရောက်တဲ့အချိန်ဟာ ညနေစောင်းပြီ ဖြစ်လို့ လိုင်းကားတွေဟာ ခိုလမ် နဲ့ ကွန်ဟိန်း မြို့မှာ ညအိပ်ကြတာ များပါတယ်….. လိုင်းကားတွေညအိပ် ရပ်နားတဲ့အတွက် စားသောက်ဆိုင်နဲ့ တွဲပြီး ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ တည်းခိုခန်း တွေကတော့ တည်းခိုလို့ အဆင်ပြေကြပါတယ်….. တောင်ကြီးမြို့ကို ကျော်လွန်သွားပြီ ဆိုရင် လိုင်းကားတွေဟာ ညနေစောင်းရင် ဆက်လက်မောင်းနှင်ခြင်းမရှိတာ့ဘဲ ရောက်တဲ့ မြို့၊ရွာမှာ ညအိပ်ရပ်နားပြီး မနက်မိုးလင်းမှ ခရီးဆက်သွားကြပါတယ်….. ကွန်ဟိန်းမြို့ကနေ မနက်စောစော ခရီးဆက်ထွက်လာရင် တာလေ၊ တာကော် (သံလွင်မြစ်ကို ဖြတ်ကူးတဲ့ တာကော်တံတားရှိတဲ့ ရွာ) ၊မိုင်းပျဉ်း၊တုံတာ စတဲ့ မြို့တွေ ကို ဖြတ်သန်းပြီးရင် တော့ ကျိုင်းတုံမြို့ကို ရောက်ပါပြီဗျာ…. တောင်ကြီးမြို့ကနေ ကျိုင်းတုံမြို့ကို သွားမယ် ဆိုရင် တော့ တစ်ညအိပ် နှစ်ရက် ခရီးကြာပါတယ်……….
ဒါကတော့ မိုင်းပျဉ်း-ကျိုင်းတုံ လမ်းပါ……(photo from google map)
ဒီပုံလေးကတော့ တောင်ကြီးဘက်ကနေ လာရင် မြင်တွေ့ရမယ့် မြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်လေးပါ (photo from facebook)
ကျိုင်းတုံမြို့ကို လေယာဉ်ခရီးနဲ့ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်ကနေဆိုရင် ၁နာရီ ဝန်းကျင်သာ ကြာပါတယ်…. ဟဲဟိုး လေဆိပ်ကနေ ဆိုရင်တော့ နာရီဝက် လောက်ပဲကြာပါတယ်………ဟဲဟိုး-ကျိုင်းတုံ ခရီးစဉ်ကတော့ နေ့စဉ်နီးပါးလောက် ရှိပါတယ်……ကျိုင်းတုံ လေဆိပ်ကို တိုက်ရိုက် သွားနိုင်သလို တာချီလိတ် လေဆိပ်ကနေတစ်ဆင့် တာချီလိတ်မှာ လည်ပတ်ပြီး ကျိုင်းတုံမြို့ကို လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့သူတွေလဲ ရှိပါတယ်….
ဒီပုံလေးကတော့ ကျုိုင်းတုံလေဆိပ် ပုံလေးပါ (photo from facebook)
ဒီပုံလေးကတော့ တာချီလိတ်ဘက်ကနေ ကျိုင်တုံမြို့ကို လာရင် တွေ့ရမယ့် မြို့အဝင်ဆိုင်းဘုတ်လေးပါ (photo from facebook)
ကျိုင်းတုံမြို့ဟာ တောင်ပေါ်မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပေမယ့် မြို့ပုံစံဟာ ဒယ်အိုးပုံစံ ဖြစ်ပါတယ် မြို့ရဲ့ပတ်ပတ်လည်ဟာ တောင်အမြင့်တွေ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်…… ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းရဲ့ မြို့တော် ဖြစ်ပေမယ့် ထိုင်းနယ်စပ်မှာ ရှိတဲ့ တာချီလိတ်မြို့လောက်တော့ စည်ကားခြင်း မရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်…. နယ်စပ်လည်းဖြစ်၊ ခရီးသွား၊ စီပွားရေးသမားများ အများဆုံးလာကြတဲ့မြို့လေးကတော့ တာချီလိတ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်….. ဒါပေမယ့် ကျိုင်းတုံမြို့ဟာ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းမှာတော့ လမ်းခရီးအချက်အချာ ကြတဲ့မြို့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်…… ကျိုင်းတုံမြို့ကနေ တောင်ကြီးမြို့၊ မိုင်းလားမြို့(တရုတ်နယ်စပ်)၊ တာချီလိတ်မြို့(ထိုင်းနယ်စပ်) စတဲ့မြို့တွေကို သွားလာနိုင်လို့ပါ….. တောင်ကြီးမြို့ကနေ ကျိုင်းတုံမြို့ကို သွားတဲ့လမ်းဟာ ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိပေမယ့်…… မိုင်းလား(တရုတ်နယ်စပ်)၊ ကျိုင်းတုံ ၊တာချီလိတ် (ထိုင်းနယ်စပ်) လမ်းဟာတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ လမ်းဖြစ်ပါတယ်…. ထိုင်း နဲ့ တရုတ်တို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ကူသန်းသွားလာတဲ့ လမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ….. ကျိုင်းတုံမြို့ကနေ တာချီလိတ်မြို့ကို သွားချင်ရင် ရန်ကုန်-မန္တလေး အဆင့်မြင့်ကားတွေလို ကားတွေနဲ့ ပြေဆွဲနေတဲ့ ကားလိုင်းတွေရှိပါတယ် ….. တာချီလိတ်မြို့ကို ကျိုင်းတုံမြို့ကနေ သွားမယ် ဆိုရင် ၄ နာရီလောက်ပဲ ကားစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်……..တစ်နေ့ကို နှစ်ချိန် ထွက်ပါတယ် မနက်ပိုင်းနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့….. ဒါကတော့ကျိုင်းတုံမြို့ကို သွားရတဲ့ ခရီးစဉ် နဲ့ ကျိုင်းတုံမြို့ရဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေလေးပါ….. ရွာသူားတို့လဲ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ကျိုင်းတုံမြို့လေးကို ဒီပိုစ့်လေးကနေ တစ်ဆင့်ရောက်ကြပြီထင်ပါတယ်…..
အားလုံးကို ခင်တဲ့ ဝဏအောင်….
About Wunna Aung
ဝဏအောင် (မန္တလေး) has written4post in this Website..
View all posts by Wunna Aung →
အာတကေပေါရင် ရန်ဂုန်က အကောင်းဆုံးပဲဗျာ..
တစ်မျိုးတော့ မထင်နဲ့ နော်..
အာကို့ အိမ်ရဲ့ ညာဘက် မျက်စောင်းထိုးက အပေါ်နားလေးမှာ အလယ်ကိုဖြတ်သွားလိုက်ရင် အောက်ဘက်မှာကျနော့်အိမ်ပါပဲ
ကျွန်တော်က မန်းလေးသားပါ …ကျိုင်းတုံမြို့မှာ တာဝန်ကျရင်းနေခဲ့တာပါ…… ခုတော့ ကျိုင်းတုံမြို့လေးအကြောင်းပြန်ပြောပြချင်လို့ ပုံတွေကိုတောင် အင်တာနက်ကနေရှာရင်း ဒီပို့စ်လေးကို တင်လိုက်တာပါ.. ရွာသူားတွေလဲ သွားလဲချင်ရင်လဲ အဆင်ပြေအောင် တင်ပေးတာပါ…..မြို့ခံလူမဟုတ်တေ့ာ မှားတာလေးတွေရှိရင် ပြင်ပေးစေချင်ပါတယ်…. ခင်မင်စွာဖြင့် ဝဏအောင်
ကိုဝဏအောင်ရေ ခုလိုလေးသိရတော့ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ဒီနှစ် နွေ တောင်ကြီးရောက်တော့ ကားလိုစီးရ
မမ မေးပြီးခါမှ မသွားဖြစ်လိုက်ဘူးလေ။ရောက်ဖြစ်
Ko Wanna Aung ရှင့်…တကယ့်ကိုအလွမ်းပြေပါတယ်နော်..ကျိုင်းတုံရန်ကုန်ခရီးက လေယာဉ်နဲ့ဆိုရင် ၁နာရီခရီးဆိုပေမယ့် ကျမတို့သွားတုန်းက မနက် ၁၁ခွဲရန်ကုန်ကထွက်ပြီး နေလည် ၃နာရီကျော်မှရောက်တာ အမှတ်တရပါ..လေယာဉ်ကရန်ကုန်ကနေပထမဆုံးမန္တလေးကို သွားတယ်…နောက်ဟဲဟိုး..တာချီလိတ် ပြီးမှကျိုင်းတုံ..လေယာဉ်အတက်အဆင်းတွေနဲ့လူလည်းတော်တော် ပင်ပန်းသွားတယ်..လေယာဉ်တစင်းနဲ့နိုင်ငံပတ်ဆွဲနေတာလေ…
မိုင်းလားသွားခဲ့တာကိုလည်းပြန်သတိယမိတယ်..မိုင်းလားဟိုတယ်မှာတည်းတော့ အစ်ကိုတို့ လိပ်စာကဒ်လေးတွေလာချထားတာမရခဲ့ဘူးလား…ကျမတို့တုန်းက တစ်ခန်းကို ၅ကဒ်ကအနည်းဆုံးပဲ
ကျွန်တော်မိုင်းလားကိုတော့ မရောက်ခဲ့ပါဘူး…. ကျိုင်းတုံလေယာဉ်ကတော့ ဟုတ်ပါတယ်…ကျွန်တော်က ပထမတစ်ခေါက်သွားတုန်းက တိုက်ရိုက်လေယာဉ်မို့လို့ ၁နာရီလောက်နဲ့ရောက်တာပါ….. လေယာဉ်ချိန်စောင့်ရတာကိုက တော်တော်လေး စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းပါတယ်….. လေယာဉ်ပေါ်တက်ယုံနဲ့ စိတ်ဒုံးဒုံးချလို့မရသေးပါဘူး….. ကိုယ်သွားမယ့် မြို့ကို လေယာဉ်ဆိုက်မှ လေယာဉ်ပေါ်ကနေ ဆင်ပြီဆိုမှ စိတ်ချရပါတယ်….. မှတ်မှတ်ရရ ကျိုင်းတုံကနေ မန်းလေးကို ပြန်ဖို့ လေယာဉ်စောင့်လိုက်တာ တစ်ညအိပ်စောင့်လိုက်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးလဲရှိပါတယ်……..
အခြေအနေ အချိန်အခါ များပေးခဲ့ရင်
ကျိုင်းတုံမြို့တွင်း ပုံလေးတွေပါ တင်ပေးနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာနော်..။
မရောက်ဖူးတဲ့ အရပ်မို့ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး သွားလည်ချင်မိတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ မmay flowers ကျိုင်းတုံမြို့တွင်း ပုံတွေလဲ တင်မှာပါ ခင်ဗျာ….. ခုတော့ နောက်မှာ ပို့စ် ၂ခု တင်ထားပါတယ် ခင်ဗျာ….. နောက်ထပ်လဲ ထပ်တင် ပေးဦးမှာ ပါ … စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါလို့ ပြောကြားရင်း……….
တစ်နေ့နေ့တော့ အရောက်လာမယ် ……….. ရယ်